Mustaqbalka Aubameyang Ee Arsenal Oo U Muuqda Inuu Soo Dhamaaday Iyo Aabaha Dhalay Xiddigan Oo Ka Nixiyey Gunners - Gool24.Net
Mustaqbalka Aubameyang Ee Arsenal Oo U Muuqda Inuu Soo Dhamaaday Iyo Aabaha Dhalay Xiddigan Oo Ka Nixiyey Gunners
Arsenal ayaa ka cabsanaysa inay weydo xiddigeeda afka hore ee Pierre-Emerick Aubameyang, waxaana murugo ku abuurtay farriin ka timid aabbaha dhalay weeraryahanka reer Gabon markii ay dhamaatay ciyaartii ugu dambaysay horyaalka Premier League ee xili ciyaareedkan.
Aubameyang oo heshiiskiisa Arsenal ay ka hadhsan yihiin wax ka yar 11 bilood ayay Gunners halis ugu jirtaa inay weydo oo uu si xor ah uga tago marka uu dhamaado xili ciyaareedka dambe, laakiin inta ka horreysa ayaa la filayaa in arrintiisa meel la saaro, gaar ahaan inta uu furan yahay suuqa iibka.
Horraantii toddobaadkan ayay niyaddu u degtay Arteta, markaas oo ay soo baxeen warar sheegaya in Aubameyang uu ogol yahay inuu saxeexo heshiis cusub oo uu £250,000 Gini ku qaadanayo toddobaadkii. Hase yeeshee, farriin uu bartiisa Instagram ku qoray aabbaha dhalay Aubameyang ayaa waxba kama jiraan ka dhigay wax walba, waxaanu yidhi: “Waxa waajib in wiilkaygu uu sameeyo go’aanka saxda ah ee inta ka hadhay mustaqbalkiisa. Wiilkayga, waa kuma qofka aan u hanweynaan lahayn inuu helo wiil adiga oo kale. Hambalyo, Waxaad tahay dhaliye run ah.”
Intaas kaddib, Aubameyang SR caddeeyey in la gaadhay waqtigii go’aanka la gaadhi lahaa, waxaanu yidhi: “Waa inaynu samayno go’aanka saxda ah ee qaybta ka hadhay xirfaddaada. Wax badan ayay warbaahintu ka hadleen, ma garanayaan inaynu nahay Bantu, waxaana jirta qaab go’aanka loo gaadho marka waanada laga helo qofka xikmadda badan oo aabbahaa ah.
“Si degdeg ah ayaanu u xallin doonaa, nabad ku seexo wiilkaygii, aabbahaa wuxuu daawanayaa hadheedhka. Waan ku jecelahay.”